Nytaovolo2nde3-2012's blog - Ny taovolo Malagasy - Skyrock.com
Ny taovolo Malagasy
RABARISON Caroline n°06,
RAKOTOARY Tatamo n°13,
RAOILISON Emilia n°18,
RASOLOJAONA Heriaina n°20,
Elèves de la Seconde 3, de l'APEAF, promotion 2012, avons l'honneur de vous présenter notre blog qui a pour thème "Ny taovolo Malagasy".
Nous vous souhaitons une agréable visite sur notre blog.
Dia faly manolotra anareo ity blog mikasika ny "Taovolo malagasy".
Mirary fitsidihana mahafinaritra anareo izahay.
Created: 15/10/2012 at 7:04 AM
Updated: 30/11/2012 at 12:12 PM
Ny taovolo dia mibahan-toerana tokoa eo amin'ny Malagasy. Mirakitra sy maneho ivelany ny zavatra mitranga ao anaty olona iray izy io. Noho izany dia manana anjara toerana lehibe ny fikojakojana azy.
Ny taovolo dia zava-kanto nentin-parazana izay mitory ny taona, ny firazanan'ny olona iray sy fiaramonina ny olona iray ary manambara tranga lehibe eo amin'ny fiainanan'ny olona andavanandro (fahaterahana, fanambadiana...) Mandritra ny fotoan-dehibe dia samy manana ny taovolony ny ankizy vavy, ny ankizy lahy, ny lehilahy, ny vehivavy, ny tanora ary ny zoki-olona. Ny taovolo tsirairay dia misy dikany mazava arakaraka ny fomba sy ny foko manao azy.
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 5:54 AM
Ny Razamben'ny Malagasy rehetra izay tonga voalohany teto Madagasikara dia nanao lava volo daholo na lehilahy na vehivavy.
Ny randram-bolon-doha no tena fihaingoana ambony indrindra tamin'ny Razana malagasy manoatra noho ny firavaka sy ny fitafiana aza, ka lazaina fa manova endrika sy mahatsara tarehy ny olona. Ireo naka vady taloha dia rendrika noho ny hatsaran'endrika amin'ny randram-bolo tsara tarehy, ka tsy nahadinika izay kilema hafa intsony. Ny tena randram-bolon'ny Razana malagasy izay niombonan'ny foko rehetra hatraiza hatraiza dia ny randram-bolo mibokoboko an-tampon-doha sy andaniny roa. Mbola hita amin'ny foko maro ihany mandraka ankehitriny io fombam-bolon-drazana io, fa indrindra ao amin'ny Antandroy sy ny Mahafaly.
Ny karazan'ny taovolo fanaon'ny Ntaolo malagasy teto Imerina dia maro tokoa. Ka izay taovolo fanaon'ny vehivavy ihany koa no fanaon'ny lehilahy. Ny nalaza indrindra tamin'ny taovolon'Imerina izay mba nanatsarany taovolo bokobokon-drazany dia ireto avy : ny roambinifolo an'ila, ny fito an'ila, ny telo an'ila, ny volo madinika, ny difisery, ny sahondra ary ny bango an-katoka sy ny tananivoho. Taovolo andavan'andron'ny vehivavy Imerina ankehitriny io, ary fanaon'ny Ntaolo lahy koa fahiny.
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 5:53 AM
a) Amin'ny ankapobeny
Ny taovolo tsirairay dia misy dikany mazava arakaraka ny fomba sy ny foko manao azy. Noho izany, ny taovolo dia ampifanarahana amin'ny toe- java misy. Ohatra ny taovolom-pifaliana,ny taovolo an-davanandro na ny taovolom-pisaonana sy ny sisa...
Tsy dia sarotra ny taovolo Malagasy ary ny randrana no fototr' izany. Ny tanjona dia ny hamoronana taovolo miha sarotra hatrany izay nalain-tahaka avy amin'ny zava-maniry. Misy karazana taovolo manokana ho an'ny sokajin-taona samihafa : ny zaza, ny ankizy, ny tanora, ny tanora mitady vady, ny olon-dehibe ary ny zokiolona. Ary ireo no nifanavahana teo amin'ny fiaraha monina.
Amin'ny kolontsaina malagasy, araka ny fomban-drazana ary ankehitriny, ny taovolo dia mifandray amin'ny toe-javatra hiainana. Ary ankehitriny aza dia mbola hita izany amin'ny fahoriana.
Misy faritra maro eto Madagasikara, mbola mitana anjara toerana lehibe ireo hevitry ny taovolo tsirairay ireo. Mampatsiaro ny fotoan-dasa izany : ny taovolo tsirairay dia mitondra hafatra , ary misy dikany mihafina na mazava eo amin'ny fiaraha monina toa ny fitadiavana vady...
b) Ny randrana
Misy ny milaza fa ny volo mirandrana dia mirakitra fihavanana ary azo itarafana ny tsy misara-mianakavy sy ny maha-iray. Ny volo no ambony indrindra eo amin'ny tenan'olombelona, ary maneho ny toerana misy ny vehivavy iray.
Ho an'ny zaza madinika dia ny randrana antsoina « lambomiditra » na randra-madinika. Manomboka eo amin'ny tovovavy, dia ny « tanana ivoho » no iraisana. Raha vehivavy maty vady kosa, dia « bango tokana », randrana iray ao an-katoka no entiny.
Raha misy zaza foraina ao amin'ny fianakaviana, dia mirandrana avokoa ny vehivavy ao an-trano : « difisesy » (misesy midina) na « randra-madinika ». Mizara tsy ankasa kosa ny fitondrana azy.
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 5:52 AM
Ireto avy ny hevin'ny taovolo :
- Mitsangana fa hande : izay midika ara-bakiteny hoe mitsangana ary arao aho.
- Tsy mitsi-basy mipoka : izay midika hoe taovolo tsy hahenoana feom-basy mipaoka ny siosion-dresaka.
- Toko vy : ny Doboka antsena, toko vy, dokodoko, karazana randrana natokana ho an'ny fotaon dehibe toy ny fanambadiana (indrindra ho an'ilay tovovavy hanambady), na ho an'ny fandevenana.
- Tsangana : dia randrana fitondra andavan'andro na rehefa misy fahoriana.
- Randra–madinika : Karazana randrana hanaovan'ireo izay handeha lavitra ny tanàna hamonjy tsena.
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 5:49 AM
Ny doboka antsena, toko vy, dokodoko, karazana randrana natokana ho an'ny fotaon dehibe toy ny fanambadiana (indrindra ho an'ilay tovovavy hanambady), na ho an'ny fandevenana.
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 6:16 AM